आज नायक दिलिप रायमाझीको जन्मदिन, कति बर्ष लागे त उनी ? – live 60media
आज नायक दिलिप रायमाझीको जन्मदिन, कति बर्ष लागे त उनी ?
आज नायक दिलिप रायमाझीको जन्मदिन परेको छ । नेपाली कथानक चलचित्र ‘आदिकवि भानुभक्त’ बाट नेपाली चलचित्रमा पाइला राखेका रायमाझीले आज आफ्नो ४० औं जन्मदिन मनाउँदैछन् । दिलिपले अभिनय गरेका ‘जिन्दगानी, आफ्नो मान्छे, आफ्नो घर आफ्नो मान्छे, के भो लौन नी, सुपरस्टार, बादलपारि, दर्पण छाया, मितिनी’ लगायतका चलचित्रले उनलाई सो समयको सर्वाधिक व्यस्त नायक बनाइदिएको थियो ।
केही बर्ष अगाडि नेपालबाटै अमेरिकाको ग्रिन कार्ड लिएर उनी स–परिवार अमेरिका पुगेका थिए । नृत्य र अभिनयमा पोख्त यी नायकको करिअर चलचित्र ‘लहना’ पछि विस्तारै कमजोर बन्यो । यसपछि उनले ‘धनसम्पत्ती, मलाई माफ गरिदेउ, मुस्कान, पाहुना, दुख, मुग्लान, मिस यू, बाटो मुनिको फूल २, कही कतै, नाई नभन्नु ल ५’ लगायतका चलचित्रमा काम गरे ।
नेपाली चलचित्रमा सहायक नृत्य निर्देशक भएर काम सुरु गरेका यी कलाकारले केही चलचित्रमा कोरसको रुपमा समेत काम गरेका छन् । आज पनि दिलिप चलचित्र निर्माण र अभिनयमा व्यस्त छन् । उनले, अभिनय तथा निर्माण गरेको चलचित्र ‘लक्का जवान’ रिलिजको पर्खाइमा छ । यस्तै, दिलिप रायमाझी भोली शुक्रबारबाट सुरु हुन लागेको ‘दि डान्सिङ स्टार्स विथ नेपाल’का निर्णायक समेत हुन् ।
विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीका ठप्प रहेका लामाे दूरीका सार्वजनिक बसहरू आजबाट गुड्ने भएका छन् । भाइरसकाे संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी सुरू गरेकाे लकडाउनसँगै बन्द भएका लामो दुरी तथा अन्तरजिल्ला सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधन बल्ल आजदेखि खुल्ने भएका हुन् ।
आजैदेखि आन्तरिक हवाइ उडान समेत खुल्ने बताइएकाे छ । मन्त्रिपरिषदकाे मंगलबार बसेकाे बैठकले १ असोज (आज) देखि नै लामो दुरीका सवारी साधन सञ्चालन गर्न अनुमति दिएकाे थियाे । यससँगै यातायात व्यवसायी र मजदुरहरू आजबाटै सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्न तयार भएका हुन् । सरकारले अनुमति नदिए पनि व्यवासायीले बस गुडाउने चेतावनी दिँदै आएका थिए ।
यातायात व्यवसायीहरूले बिहीबार बिहानसम्म बस सञ्चालनको कार्यविधि उपलब्ध गराउन पनि माग गरेका छन् । सरकारले कार्यविधि बनाउने जिम्मा भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयलाई दिएको छ । सरकारले अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य मापदण्ड लागू गर्न निर्देशन दिएकाे छ । जसअनुसार बसले सिट क्षमताको आधा मात्रै यात्रु बोक्न पाउनेछन् ।
यसैकारण तोकिएको भाडादरभन्दा ५० प्रतिशत अतिरिक्त भाडा लिन सक्ने निर्णय गरिएको छ । सिटबाहेक अन्यत्र यात्रु राख्न भने पाइनेछैन । साथै चालक, सहचालक, परिचालक, बुकिङका कर्मचारीलाई मास्क, स्यानिटाइजर, पन्जा, फेस भाइजकलगायतका स्वास्थ्य उपकरण अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्न अनुरोध गरिएकाे छ । यात्रुले पनि अनिवार्य रूपमा मास्क प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र यातायात सम्बद्ध तीनवटै ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिले बुधबार सिंहदरबारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङसँग भेट गरेर यातायात सञ्चालन प्रक्रियाबारे थप छलफल गरेका थिए । भेटपछि उनीहरूले सामूहिक विज्ञप्ति जारी गर्दै यातायात सञ्चालन गर्न दिने सरकारी निर्णयकाे स्वागत गर्दै धन्यवादसमेत ज्ञापन गरेका थिए ।
← देख्ने बित्तिकै साक्षत माहादेव को दर्शन सँगै ॐ लेखेर एक Share गर्नुस सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ..
सोनिको पूर्व ब्वाइफ्रेन्ड भनिने सन्तोष पहिलो पटक मिडियामा, सोनिका श्रीमानले गरेका थिए यस्तो घिनलाग्दो कुरा (भिडियो हेर्नुस्) →